Mapurisa Anosunga Dzimwe Nhengo dzeMDC
Chivabvu 12, 2008
Mapurisa emuBindura anonzi asunga mangwanani eMuvhuro, nhengo dzeMDC shanu, idzo dzinosanganisirawo vakanga vakamirira MDC musarudzo yemuBindura North, VaPeter Mabika, vachivapomera mhosva yekupisa purazi reDawmill riri kwakare kuBindura.
Vasungwa vanonzi vakachengetedzwa nemapurisa paBindura Police Station. KuManicaland, mapurisa asungawo vakasarudzwa kumirira Mutasa Central muparamende, VaTrevor Saruwaka, avo vanonzi vanga vaenda kuPenhalonga Police Post, vachitsvaga nhengo yavo inonzi yakapambwa nevatsigiri veZanu PF neChishanu.
KuChitungwiza, vakasarudzwa kuti vamirire Chitungwiza South muparamende, VaMisheck Shoko, vanoti vakambochengetedzwawo nemapurisa svondo rapera kwemaawa anodarika mana, vachipomerwa mhosva yekuronga kuparadza kamba yevechidiki veZanu PF iri paZiko, mumaruwa ekwaSeke.
KuMuzarabani kunonzi mapurisa neChishanu akafukunura mitumbi mitanhatu yevanofungidzirwa kuti vatsigiri veMDC vakapondwa. Zvinonziwo mukuru weAirforce, VaPerence Shiri, vakakurudzira vatsigiri veZanu PF kuti vaparadze makamba avakaisa paChadereka nePahoya, kuMuzarabani. Zvinonzi VaShiri vakakurudzirawo mapurisa kuti vasunge vari kukonzera mhirizhonga.
Ukuwo sangano reZimbabwe Peace Project rinoti rakaparura chirongwa chekufumura vakuru veZanu PF vari kutsigira nemari nechikafu vanhu vari kukonzera mhirizhonga.
National Director weZPP, Muzvare Jestina Mukoko, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti izvi zvingangoita kuti vakuru ava vanyare nezvavari kuita.